Tuesday February 05, 2019 - 14:40:50 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Xukuumada Somaliland ayaa shaacisay in macaluul baahsani ay soo foodsaartay dadka shacabka ah ee ku nool lixda gobol ee waa weyn e Somaliland. Guddoomiyaha hay'adda ka hortaga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka
Hargeysa-(Caalami-News)-Xukuumada Somaliland ayaa shaacisay in macaluul baahsani ay soo foodsaartay dadka shacabka ah ee ku nool lixda gobol ee waa weyn e Somaliland. Guddoomiyaha hay'adda ka hortaga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh ayaa soo bandhigay tirada dadka reer Somaliland ee qarka u saaran inay soo foodsaarto macaluul.
Guddoomiye Faysal Cali Sheekh oo shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahaygargaar deg deg ah oo la gaadhsiiyo dadkaasi waxaanu hadalkiisa ku bilaabay: "Guud ahaan dalka somalilandsanadkan waxa u baahan mucaawinooyindad gaadhaya 1,5 88, 2 50 ( hal milyan, shanboqol iyo sideed iyo sideetan kun laba boqol iyo konton qof) kuwaas oo iskugu jira xaalado bilaw ah, mid dhexdhexaad ah iyo xaalado degdeg ah kuwaas oo ku nool gobolada somaliland oo dhan.”
Sidoo kale guddoomiye Faysal Cali Sheekh ayaa baaq u diray hay’addaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo dawlada Somaliland waxaanu yidhi: "Waxaanu ka codsanaynaa dhamaan hay’addaha caalamiga ah, kuwa qaramada midoobay, dawlada somaliland iyo shacabka somalilandba in wixii ay dadkaas u qaban karaan ay qabtaan, baaqana maanta ayaanu soo saarnay anaga oo u qaybinay hay’addaha caalamiga ah oo dhan, waana wakhti ku tala gal iyo diyaar garaw ah iyada oo meelaha qaar ay ka jiraan biyo la,aan iyo caws la,aan waxaana jira dhulal badan oo laysku guur guurayo kuwaas oo xaga bariga u badan, waxa kale oo jira dhulal badan oo colaaduhu saameeyeen kuwaas oo ay ka mid yihiin Koonfurta Sool, Tukaraq, Ceel Afweyn iyo dhulka xeebaha oo khasaare ka soo gaadhay duufaantii ku dhufatay bishii May ee sanadkii hore. Waxaanan ugu baaqaynaa xukuumada, hay’addaha caalamiga iyo dadweynaha in la sii wado mucaawinooyinkii hore loo gaadhsiiyey dadka deegaanadaas taas oo waxbadan tartay si aanay ugu gudbin qaybta xaalada culus, waxaanan warbixinadii la wadaagnay hay’adda MFSU iyo kuwa kale ee caalamiga ah anaga oo u jeedinay in wax lala qabto dadka reer somaliland ee jiilaalku saameeyey.”
Xaaladdan ayaa muujinaysa in gabi ahaanba uu fashilmay qorshihii ay xukuumadda Muuse Biixi ku baaqaysay ee ahaa isku filnaanshaha cuntada iyo sidoo kale tashiilkii ay sheegi jirtay in ay adkaysay kharashaadkii xukuumadda ka bixi jiray.